घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्विस फुटबल खेलाडीहरू रोमन बुर्की बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो रोमन बुर्की बायोग्राफीले तपाईंलाई उनको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँदछ।
सरल शब्दहरूमा, LifeBogger तपाईंलाई पालना वर्ष देखि आफ्नो प्रख्यात भए पछि आफ्नो यात्रा को एक पूर्ण ब्रेकडाउन दिन्छ।
एक राम्रो गोल स्टपर हुनुको अर्को पक्ष, तपाईं र मलाई थाहा छ उहाँ, जस्तो डेभिड डी Gea सबैभन्दा बीच हो विश्व फुटबलमा चल्ती गोलकीपरहरू- ब्लीचर रिपोर्टले एक पटक यकिन गर्‍यो।
फेरि, को रूपमा लोकप्रिय छैन मानुएल न्यूउर or Kepa, केवल केही फुटबल प्रशंसकहरू रोमन बुर्कीको बायोग्राफी पढ्नमा रुचि राख्नेछ जुन हामीले तयार गरेका छौं। अब, थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
रोमन बुर्की बाल्यकाल कहानी:
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, उनको उपनाम "सेक्सी“, तिमी आफूलाई कहिले पनि बोलाउँदैन। स्विट्जरल्याण्डको गोलकीपरको जन्म १ November 14 ० नोभेम्बरको दिन उनकी आमा, करिन बुर्की र बुबा मार्टिन बुर्कीको, स्विजरल्याण्डको नगरपालिकामा भएको थियो।
सानो रोमन संसारमा पहिलो छोरा र बच्चाको रूपमा आफ्ना मायालु आमाबाबुको बीच एक सफल मिलनबाट जन्मेको रूपमा आए। गोलकी उसको सानो भाईसँगै हुर्कियो जो मार्को बर्की नाममा जान्छ। तीन वर्षको उमेरको फरकका साथ दुबै भाईहरू पहिलो दिनदेखि नै राम्रा साथी भए।
एउटा सानो छोराको साथ पहिलो छोरा र छोराको रूपमा, सानो रोमीले उनीमा जिम्मेवारीको ठूलो भावना राखेका थिए। शुरूबाट, उनले ठूला भाईको भूमिका खेल्न शुरू गरे। वास्तवमा, मार्कोको हेरचाह गर्नु एउटा ठूलो दाइजोको रूपमा पहिलो जिम्मेवार थियो।
समय बित्दै जाँदा, भावी स्टपरले बर्की परिवारको व्यापारलाई पछ्याउन न्यानो बनाउन थाले। त्यो के हो? ... यो जिम्मेवारी उसको बुबाको फुटबलिing पदचिन्हबाट सिक्नु बाहेक अरू केही होइन, जुन हामी तपाईलाई यस जीवनीको पछिल्लो भागहरूमा भन्नेछौं।
रोमन बुर्की परिवार पृष्ठभूमि:
परिवारको प्रमुख (मार्टिन) को धन्यवाद, उनका बच्चाहरूको भाग्य जति सक्दो चाँडो सुरक्षित भयो। के तपाईंलाई थाहा थियो? ... स्विस गोलकीपर (रोमन बुर्की) एक खेल परिवार पृष्ठभूमिबाट आउँदछ। उनका बुबा मार्टिन बुर्की गोलकीपर थिए र उनकी आमा सायद घरधनी थिए।
दुबै रोमन बुर्कीका आमाबुवाले मध्यमवर्गीय घर चलाउँथे। कम खर्चको लागि धन्यबाद, तिनीहरू कहिल्यै पैसाको साथ सled्घर्ष गर्दैनन्। वास्तवमा मार्टिन र करीनको परिवार मुन्सिgen्गका १२,००० बासिन्दाहरूमध्ये थिए जो ती सुन्दर स्विस परिधीय इलाकाहरूमध्ये एकमा बस्थे।
रोमन बुर्की परिवार उत्पत्ति:
औसत फुटबल फ्यानमा, गोलकीपर स्विजरल्याण्डबाट आउँछ। केही प्रशंसकहरूलाई सम्भवतः कल्पना छैन कि रोमन बुर्कीको परिवार स्विट्जरल्याण्डमा अवस्थित नगरपालिका मुन्सिin्गनको हो। नोट, यो एक जर्मन शहर संग भ्रमित हुनु हुँदैन, यसलाई Münsingen पनि भनिन्छ।
तलको नक्शाबाट तपाईले महसुस गर्नुहुनेछ कि मोन्सिgen्गन स्विजरल्याण्डको जर्मन-भाषी क्षेत्रमा पर्छ। यो कुरा भन्न उचित छ कि रोमन बुर्की एक स्विस-जर्मन हो र उसका आमा-बुबाले अलेमेनिक भाषा बोल्छन्। यस भाषा समूहका व्यक्तिहरूको जर्मन पारिवारिक जरा र वंशहरू छन्।
रोमन बुर्की प्रारम्भिक वर्षहरू - शिक्षा र क्यारियर निर्माण:
मुन्सिgen्गेन जहाँ उनको भाग्य सम्बन्धित सबै शुरू भयो। भूतपूर्व गोलकीपरका रूपमा मार्टिन बुर्कीलाई फुटबलबाट अवकाश लिने समस्या भयो। प्रारम्भमा, महान बुबाले आफ्ना छोराहरूलाई बुर्की परिवारको सपनाहरू बाँच्नका निम्ति पहिलो (रोमन) बाट शुरू भएको आशा गरेका थिए- एक पेशेवर र सफल फुटबलर बन्ने.
उसको जुत्तामा झुण्डिए पछि, मार्टिन बुर्कीले आफ्ना छोराहरूलाई भविष्यको लागि तयार पार्नका लागि आफैमाथि लाग्यो। दूरदर्शि बुबाले सन्‌ १ 1999 XNUMX। मा सानो रोमनलाई एफसी मुन्सिंगेन (परिवारको घर नजिकको स्थानीय क्लब) मा भर्ना गरे। त्यहाँ, भविष्य BVB स्टारले आफ्नो गोलकीपिंग कोष राखे।
रोमन बुर्की जीवनी- प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
२०० 2005 को आसपासमा स्विजरल्याण्डका मुख्य प्रशिक्षक कोबी कुहनले १ 2006 1994 since पछि पहिलो पटक २०० XNUMX को विश्वकपको लागि योग्यता प्राप्त गरेका थिए। रोमन बुर्कीको परिवारलगायत सबै जना देशको फुटबलको भविष्यप्रति उत्साहित थिए।
स्विजरल्याण्डको राष्ट्रिय फुटबल सम्भावनाले मार्टिनलाई आफ्नो छोरालाई प्रख्यात प्रतिष्ठानमा नाम दर्ता गराउन उत्साहित तुल्यायो। आशावादीताको बाबजुद पनि, उसको छोरोको लागि योजना अनुसार पहिलेको कुरा भएन - जवान गोलकीपर।
Jurgen Klopp बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
रोमन बुर्कीले आफ्नो प्रारम्भिक युवा क्यारियरको बखत धेरै निराशाहरूको सामना गर्नुपर्‍यो। अधिक महत्वपूर्ण एकेडेमीहरूको लागि अगाडि बढ्न को लागी प्रयास हुन सकेन, फुटबल परीक्षण असफल भयो। उनलाई असफल गर्ने क्लबहरू मध्ये एक, जसले यति उदास बनायो कि एक थोरको बर्नीज ओबरल्याण्ड शहरको एक स्विस फुटबल टीम एफसी थुन थियो।
मानसिक स्वास्थ्यबाट पीडित र कसरी उसको बुवाले आफ्नो युवा क्यारियर बचाउनुभयो:
हामी फुटबल प्रशंसकहरूले उहाँलाई एक BVB शर्टमा देख्दैनौं यदि तिनका बुवाले मानसिक कोच राखेर हस्तक्षेप नगरेका थिए जसले उसलाई अकादमी फुटबलको अस्वीकारको तनावबाट आफ्नो दिमाग हटाउन मद्दत गर्थे। सत्य यो हो, बुर्की मानसिक स्वास्थ्यबाट पीडित थिए र उनको बुवाले उनको जवान क्यारी बचत गरेr.
रोमन बुर्कीका अभिभावकहरूले मानसिक कोच भाडामा लिएको यो निर्णयले परिवारको सपनालाई जीवित राख्यो। यो उपलब्धिले आशालाई निम्त्यायो - बीएससी युवा केटाहरू (बर्नमा अवस्थित शीर्ष स्विस खेलकुद क्लब) बाट जसले युवा गोलकीपरलाई परीक्षणको लागि आमन्त्रित गरे।
रोमन बुर्की जीवनी- प्रख्यात कथाको मार्ग:
के तपाईंलाई थाहा छ?… भावी गोलकीपरले बीएससी युवा केटाहरूको साथ ट्रायल लिनको दुई घण्टा अघि हाम्रो आफ्नै रोमन आफ्नो बुबातिर फर्किए, जसले उसलाई क्लबको टेस्टिंग मैदानमा लगे र भने, युरोस्पोर्टका अनुसार।
बुबा,… होईन, म जवान केटाहरूमा सामेल हुने छैन। तपाईं किन हैन? ... आफ्नो बुबा, मार्टिन सोधे।
बर्कीले उनको बुवालाई भने कि एफसी थुनमा उनको अस्विकारले उनलाई निरुत्साहित बनायो र उनी आफ्नो क्यारियर जारी राख्न यति विचलित भयो। तसर्थ, उहाँ युवा केटाहरूलाई अस्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ र फुटबलमा पनि छोड्नुहुन्छ।
धन्यबाद, यो रोमन बुर्कीका अभिभावक र अन्य प्रियजनहरूको संयुक्त प्रयासले युवा केटाहरूको दिमाग जुटाउन किन्नु भन्दा पहिले उनले युवा केटाहरूमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरे।
रोमन बुर्की जीवनी- फेम टु फेम कथा:
परिवार र साथीहरूको आनन्दको लागि, सानो गोलकीपरले उडान र colors्गका साथ युवा केटाहरूको परीक्षण पार गरे। २०० 2005 देखि २०० From सम्म, बर्की उनीहरूको एकेडेमीमा थिए। २०० in मा उनी स्नातक भए र तुरुन्तै वरिष्ठ टीममा सामेल भए जहाँ उनले धेरै त्याग गर्न शुरू गरे।
उनी कसरी सफल भए:
Loanणमा अगाडि बढ्ने र ग्रासोपरमा अर्को स्थानान्तरण (अर्को ठूलो स्विस क्लब) रोमनले गरेको सब भन्दा राम्रो प्रारम्भिक निर्णय थियो। यद्यपि स्विजरल्याण्डमा उनको सबैभन्दा ठूलो क्लब फुटबल उपलब्धीले उहाँकी टिड्डी टोलीलाई २०१ 2013 मा स्वीस कप जित्न मद्दत गरिरहेको थियो। आफ्नो टीमलाई सफल हुन मद्दत गर्न बुर्की भाँच्नु भएको पछाडि र पेटको मांसपेशीको तनावले खेल्नुपरेको थियो।
यो उपलब्धिले एक जर्मन स्थानान्तरण भयो। यस समयमा, रोमन आफ्नो देश, आमाबाबु र परिवारका सदस्यहरू पहिलो पटक जर्मनी छाडे जहाँ उनी सामेल भए एससी फ्रिबर्ग। एक बर्ष पछि, २०१ 2014 मा, थमस टुकेल उसलाई बोरुसिया डार्टमंडमा बोलाइयो। रोमन बर्कीको जीवनी राख्ने क्रममा उनीसँग जर्मन DFB कप रहेको छ।
बाँकी, हामी अक्सर भन्छौं, अब इतिहास हो।
रोमन बुर्की प्रेम जीवन - प्रेमिका, पत्नी, बच्चाहरू?
पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, त्यहाँ कुनै तथ्यलाई इन्कार गर्ने छैन जुन उसको प्यारो हेराईले महिलाहरूलाई आकर्षित गर्दैनन् जसले आफूलाई सम्भावित प्रेमिका र पत्नी सामग्रीको रूपमा ट्याग गर्ने थियो। तलको फोटोबाट हेरेर तपाई आफ्नो त्यो उपनामलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ - सेक्सी। यस सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई रोमन बुर्कीको प्रेम जीवनको ब्रेकडाउन दिनेछौं।
जब उनको लागि उनको विचार को लागी सोधे सपना महिला, प्रेमिका वा पत्नी, रोमन बुर्कीले निम्न अनुसार भने स्वेइजर-इलस्ट्रेट.
म कुनै खास प्रकारको कुरालाई प्राथमिकता दिन्न, तर उनीको हार्दिक अनुहार हुनुपर्दछ, किनकी हेर्नु भनेको तपाईको आँखालाई पहिलो स्थान समात्ने र चासो जगाउने हो।
म त्यस्तो व्यक्ति चाहन्छ जो मलाई रुचि राख्छन् एक व्यक्ति को रूप मा र केवल एक फुटबलरको रूपमा।
रोमन बर्की डेटि History इतिहास - विगत र वर्तमान प्रेमिका + पत्नी हुन:
सर्वप्रथम, गोलकीपरले सन् २०१० को बीचमा सम्बन्धहरू सुरू गर्यो। उनले डेटि by गरेर शुरू गरे नास्तास्जा ब्यूटलर, जो आफ्नो पहिलो प्रेमिका र बाल्यकालको प्यारी देखिन्छ। स्विजरल्याण्डको बर्नमा रहेको ड्राइभि school्ग स्कूलमा ती दुई एक अर्कालाई भेटेर प्रेम गर्थे।
Bürki BVB कदम पछि, दुई प्रेम चराहरु बीच समस्या शुरू भयो, लामो दूरी सम्बन्ध को लागी धन्यवाद छैन। दुःखको कुरा, रोमन बर्की आफ्नो मोडेल प्रेमिकाबाट अलग भए २०१ 2016 को आसपास (स्टेन रिपोर्ट अनुसार)।
अफवाहहरु यो छ कि पछि पछि, प्यारा गोलकीपर मिति मा एक मोडल र ब्लगर नाम मा गए Chiara Bransi- उनको दोस्रो प्रेमिका
यद्यपि रोमन बुर्कीको जीवनी उत्पादन गर्ने क्रममा श्री हन्ड्सम हाल जर्मन नामको सुन्दरताको साथ सम्बन्धको आनन्द लिदै छन्। मार्लेन वल्देरमा-अल्वारिज
सबै संकेतहरूबाट, यो देखा पर्दछ Marlen रोमन बुर्कीकी पत्नी र आफ्ना बच्चाहरूको आमा बन्ने सम्भावना छ। सुन्दर महिला दक्षिणी जर्मनीबाट आउँछिन्, र उनी एक फिटनेस व्यक्ति हुन् जसले इन्स्टाग्राममा उनको कसरत भिडियो साझा गर्छिन्।
मार्लेन वल्देरमा-अल्वारिज क्याथीसँग धेरै नजिक देखिन्छ, जो हुनुहुन्छ म्याट हम्मेल्स'पत्नी। साथै, मेलानिया विन्डलर, जो मुटुको पोशाक हो मानुएल आकांजी.
रोमन बुर्की निजी जीवन:
हो, तपाईंले सम्भवत उसलाई उसको सुन्दरता र ती अन-पिच चकाचो प्रदर्शनका लागि चिन्नुहुन्छ। जे होस्, तपाईंलाई थाहा छैन सायद रोमनको जीवन फुटबल वा उसको व्यक्तित्वको बाहिर जीवन बिताउने तरिका हो।
पहिलो र सब भन्दा महत्वपूर्ण, गोलकीपर जनावरहरूको लागि एक नरम पक्ष छ तपाईं पनि गोल पोष्टमा देखिए पनि। उनले एक पटक अन्तर्वार्तामा निम्न कुरा भनेका थिए।
जब मैले बर्नको पशु पार्कमा भालुको मृत्युको बारेमा पढें, यसले मलाई गहिरो चोट पुर्‍यायो। साथै, मेरो आमाबुबाको बिरालोको मृत्यु भएको बित्तिकै संसार मेरो लागि लगभग खत्तम भयो।
केही पशु-मायालु फुटबलरहरू जस्तै, BVB गोलकीपरको सानो कुकुर छ जसलाई उनले क्लिफ भन्छन्। यदि उसले पुस्तकहरू पढिरहेको छैन र पोडकास्टहरू सुन्दैन भने, रोमन आफ्नो कुकुर संग हुन सक्छ।
उनको प्यारा / ह्यान्डसम लुकको बारेमा:
निस्सन्देह, स्विस आफ्नो पुस्ताको सबैभन्दा सुन्दर गोलकीपर हो। आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि, रोमन बुर्की गम्भीरतासाथ लिन्छन्, उनको उपस्थिति शुटमा होस् वा हरेक पटक ऊ घर छोड्छ। उसको शब्दमा;
म सार्वजनिकमा हुँदा म सभ्य देखिन चाहन्छु। म घर छोड्नु अघि, म ऐनामा हेर्छु। तर सम्भवतः यो दिन प्रत्येक फुटबलरको साथ हो।
फुटबल सेवानिवृत्ति योजनाहरु:
अन्तमा, आफ्नो बुर्कीको व्यक्तिगत जीवनमा, स्विसले घर जग्गा व्यवसायमा जानको लागि रुचाउँदछ जब उसले आफ्नो बुटहरू समात्दछ। रोमन बुर्की मन पर्छ माट Hummels उसको उत्तम व्यवसाय साझेदार हुन सक्छ।
रोमन बुर्की जीवनशैली:
गोलकीपरलाई विलासी जीवन बिताउनको लागि एक BVB मासिक ज्याला € २००,००० र salary २.200,000 मिलियनको तलब तलब छ। रोमन बुर्कीको जीवनशैलीको व्याख्या गर्न हामी तपाईंलाई केवल उसको कार र नेट मूल्यको बारेमा मात्र बताउने छौं। अब हामी उसको अटोमोबाइलका साथ सुरु गरौं।
रोमन बुर्कीको कार:
सत्य यो हो कि स्विट्सीले चिसो र ठुलो पा for्ग्राहरूको लागि नरम स्थान राख्छ। रोमन बुर्की उनको मर्सिडीज बेन्ज जी-क्लास लक्जरी SUV को मिलाउन ड्रेसिंग रुचाउँछन्। कारको छनौट उसको पोशाक मोडमा निर्भर गर्दछ, र प्रत्येक अटोमोबाइलको आफ्नो सुरुवातीहरू र तिनीहरूको नाम प्लेटहरूमा जन्म मिति छ।
रोमन बुर्की नेट वर्थ:
निस्सन्देह, उसको २.2.77 मिलियन डलर वार्षिक तलब २०१ 2017 देखि भुक्तान भइसकेको छ। त्यसका लागि, पैसा विज्ञहरू उसको worth million मिलियनको कुल सम्पत्ति अनुमान गर्न अघि बढेका छन्। उसको भर्खरको जुन २०२० को सम्झौतालाई ध्यानमा राख्दै, यो मान निश्चित रूपमा वृद्धि हुनेछ।
रोमन बुर्की पारिवारिक जीवन:
आफ्नो जीवनको पहिलो क्षणदेखि नै, रोमन बुर्की आफ्नो आमा र बुबा, आफ्नो कान्छो भाइ, मार्को मा समर्थन मा निर्भर छ। तल उसको चित्रण उनको घनिष्ठ परिवार छ किनकि उनीहरूले आफ्नो स्विस घरमा शटको आनन्द लिन्छन् - जहाँ सबै कुरा शुरू भयो।
रोमन बुर्की पारिवारिक जीवन। निकट-बुनिएको परिवारले उनीहरूको घरमा तस्बिरको तस्बिरको मजा लिन्छ - यस्तो ठाउँ जहाँ सबै कुरा (सफलता) शुरू भयो। यस भावनात्मक खण्डमा, हामी तपाईंलाई रोमन बुर्कीका आमा बुबा र परिवारका सदस्यहरूको बारेमा बढी बताउनेछौं। अब, उनको बुबा, मार्टिन संग शुरू गरौं।
रोमन बुर्कीको बुबाको बारेमा:
स्विसका अनुसार उनका बुबा मार्टिनले उनको छोरा वा प्यारोलाई दिन सक्ने सब भन्दा ठूलो उपहार दिए। यो उपहार उनीमाथि विश्वास गर्नु भन्दा अरु केही होइन, विशेष गरी त्यस्तो समयमा जब उसले व्यावसायिक गोलकीपर बन्ने मौका छोडिदियो।
रोमन बुर्कीको ड्याड-मार्टिनबिना, क्यारियर सम्भव थिएन। ऊ आफ्नो छोराको धेरै नजिक देखिन्छ। मार्टिन एक त्यस्तो किसिमको बुबा हुन् जसले आफ्नो छोरा सफल भएको बावजुद पनि खेलको फूला क्षेत्रहरूको विश्लेषण गर्न टेलिफोन कल गर्छन्।
रोमन बुर्कीको आमाको बारेमा:
महान आमाले सफल छोराहरू जन्माएकी छिन्, र करीन पनि यसको अपवाद होइनन्। रोमनले आफ्नो आमाको बारेमा कडा कुरा गर्थ्यो, तपाईं आमाको दिनमा उनको तस्वीर पोस्ट गर्न कहिल्यै बिर्सनुहुन्न। करिन बुर्कीले आफ्नो बाल्यावस्थाको सबै भन्दा राम्रो स्मृति बनाउँदछ, महान मातृ स्याहारको लागि धन्यवाद जुन उनी एक बच्चा थिए।
रोमन बुर्की भाइको बारेमा:
मार्को बर्की, जुलाई १ 10 1993 of को १० औं दिनमा जन्म भएको पनि एक स्विस फुटबलर हो जसले बायाँ खुट्टे सेन्टर-ब्याकको रूपमा खेल्दछ। जब म यो बायो लेख्छु, बर्की परिवारको अन्तिम जन्मेको उनको फुटबल खेल्छ स्विजरल्याण्डको लुसेर्न शहर स्थित स्पोर्ट्स क्लब एफसी लुजरनमा।
उसको ठुलो भाई जस्तो नभई, मार्को बुर्की त्यति लोकप्रिय छैन, न त उनी परिवारका रोटी खाने व्यक्ति नै हुन्। जे होस्, आफ्नो बुवा र ठूला भाईको पाइला पछ्याउँदै, रोमनले उनलाई सफल बनाए। रोमनले जस्तै मार्को पनि युवा केटाहरूसँग सामेल भए, र क्लबसँगै २०१/2017/२०१ Super सुपर लिग जितेर पनि अघि बढ्यो।
रोमन बुर्की अनटोल्ड तथ्यहरू:
हो, तपाइँ सायद स्विसलाई त्यो सुन्दर र स्टाइलिश गोलकीपरको रूपमा चिन्नुहुन्छ जसले एक पटक BVB लाई बायरन म्यूनिखको बिरूद्ध शीर्षक चुनौती पुर्‍याउन मद्दत गर्‍यो। यस खण्डमा, हामी तपाईंलाई केही कम ज्ञात रोमन बुर्की तथ्यहरू बताउनेछौं। अब सुरु गरौं।
तथ्य # १- ऊ एक BVB बस हमलाको शिकार थियो- जिम्मेवार मानिस १ 14 बर्ष भयो:
२०१round को आसपास, सेर्गेई वेनरगोल्डले अकल्पनीय कुरा गरे। रूसी परिवार मूलका जर्मनले BVB खेलाडीहरूलाई आतंक निम्त्याउन धातु पिनले भरिएका बमहरू लुकाए। दु: खको कुरा, सडकको बम बन्न लाग्यो जब क्लब बस जसमा रोमन बुर्की थियो, एक हेज एक च्याम्पियन लीग क्वार्टर फाइनलको लागि जाँदै थियो।
यद्यपि कुनै जीवन हराएको थिएन, तर त्यहाँ दुई चोटि चोटपटक थिए। विष्फोट पछि रोमन बुर्कीले दिनको लागि निद्रा समस्याहरू सामना गर्नुपर्यो। उसको स्वास्थ्य लाभको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौं।
तथ्य # १- पछाडि कारण रोमन बुर्कीको ट्याटूहरू:
स्विससँग धेरै राम्रा ट्याटूहरू छन्, जुन उनको सुन्दरतामा योगदान गर्दछ। सायद होशियार अवलोकन बिना पनि, तपाईले महसुस गर्नुहुनेछ उसको टन्ड शरीरमा धेरै शरीर कलाहरू छन्। रोमन बुर्कीले एक पटक यी भनेका थिए, किन उनी ट्याटूको बारेमा यत्तिको इच्छुक छ भनेर सोध्दा। उसको शब्दमा;
म ट्याटूमा छु किनकि पिचमा जाँदैछु; हामीले सबै घण्टी र घाँटीहरू निकाल्नु पर्छ। मेरो शरीर कला मेरो गहना हो।
त्यतिखेर, एक किशोर किशोरीको रूपमा, रोमन बुर्कीका अभिभावकहरूले उनलाई प्रारम्भिक रेखाचित्रको लागि स्वीकृति दिए। यी दिनहरु वयस्क को रूप मा, उनीहरु उनीहरुको राय माग्दैनन्। स्विस फुटबलरले पीडाविहीन टेक्नोलोजी देखा पर्दा आफ्ना केही ट्याटूहरू हटाउने आशा राख्दछ जुन भविष्यमा आउनेवाला छ।
तथ्य # १- रोमन बुर्कीको धर्म:
उसको ट्याटुहरूमा, अग्रभागमा मरियम र येशू हुनुहुन्छ। यसले यस तथ्यलाई औंल्याउँछ कि रोमन बुर्कीका आमा बुबाले उनलाई इसाई धर्मको क्याथोलिक विश्वासको पालन गर्न हुर्काएको हुन सक्छ। स्विट्जरल्याण्डले एकपटक सोधे जब उनी हप्तामा चर्च जान्छन् भने। उसको शब्दमा;
म हरेक हप्ता चर्च जान्छु। तर म केहि सिद्धान्तहरुमा विश्वास गर्दछु, विशेष गरी एउटाले भन्छ कि तपाईले अरुसंग व्यवहार गर्नु पर्छ जस्तो तपाईले व्यवहार गर्न चाहानुहुन्छ। साथै, तथ्य यो पनि छ कि त्यहाँ राम्रो कामको लागि एक पुरस्कार छ।
तथ्य # १- औसत मानिससँग तुलनामा तलब ब्रेकडाउन:
टेन्चर / कमाई
प्रति वर्ष 2,944,087 CHF € 2,765,208 £ 2,503,799 $ 3,091,941
प्रति महिना 245,341 CHF € 230,434 £ 208,649 $ 257,662
प्रति हप्ता 56,530 CHF € 53,095 £ 48,076 $ 59,369
प्रति दिन 8,075 CHF € 7,585 £ 6,868 $ 8,481
प्रति घण्टा 336 CHF € 316 £ 286 $ 353
प्रति मिनेट 5.6 CHF € 5.2 £ 4.7 $ 5.8
प्रति सेकेन्ड 0.09 CHF € 0.08 £ 0.07 $ 0.09
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो रोमन बुर्कीबायो, यो उसले कमाएको हो।
के तपाईंलाई थाहा छ?… औसत जर्मन जसले month,3,770० यूरो एक महिना कमाउँछ, कम्तिमा कम्तिमा पनि काम गर्नु पर्छ पाँच वर्ष र एक महिना बुर्कीको BVB मासिक तलब २€०,230,434 (२०१ st तथ्या .्क) बनाउन।
दोस्रो, जहाँ रोमनको बुर्की परिवार (स्विजरल्याण्ड) बाट आउँछ, citizen'6०२ सीएचएफ कमाउने औसत नागरिकले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तीन वर्ष र एक महिना उनको मासिक तलब बनाउन जुन २245,341१ CHF को बराबर छ।
रोमन Bürki जीवनी जिज्ञासा
पुरा नाम: रोमन बर्की।
जन्मे: १ November नोभेम्बर १ 14 1990 ० स्विट्जरल्याण्डको मोन्सिंगेनमा।
अभिभावक: करिन बुर्की (आमा) र मार्टिन बुर्की (बुबा)।
पारिवारिक मूल: अलेमानिश बोलीको स्विस-जर्मन।
Siblings: मार्को बर्की नाम गरेका भाइ।
विगतका सम्बन्धहरू: नास्तास्जा बउटलर र चियारा ब्रांसी (पूर्व-ग्रिलफ्रेंड्स)।
पत्नी: मार्लेन वल्देरमा-अल्वारिज
मीटर र फिटमा उचाई: १.1.88 मिटर वाfफिट २ इन्च।
रुचि: पुस्तकहरू पढ्दै र पोडकास्टहरू सुन्न।
प्रारम्भिक फुटबल शिक्षा: FC Münsingen र युवा केटाहरू।
ट्याटू रोल मोडेल: सर्जियो रामोस
फुटबल भूमिका मोडेल: मानुएल न्यूउर।
चीजहरूलाई र्यापि up गर्दै:
सारांशमा, हामीले सिक्यौं कि रोमन बुर्कीका आमा बुबा (विशेष गरी उनका बुवा) आज उनको सफलताको एक मात्र कारण हो। यो लेख हामीलाई सिकाउँछ विजेता कहिले पनि छोडदैनन्, र Quitters कहिले विजयी हुँदैनन्। हामी आशा गर्दछौं तपाईंले रमाईलो गर्नुभयो। यदि तपाईंसँग छ भने, कृपया दयालु लेख्नुहोस् जुन तपाईं हाम्रो लेख र गोलकीपरको बारेमा टिप्पणी खण्डमा सोच्नुहुन्छ।